I-100'S UJASON ROTHENBERG UTHETHA 'WANHEDA' - JASON ROTHENBERG
Kungcono Ubize Usaul
Uphambene Ex Intombi
Umdali we-100 uJason Rothenberg Uthetha ngeWanheda kwaye Yintoni elandelayo ngoClarke kunye nayo yonke iSkaikru
Ukuba ubone i-premiere ye-3 yeveki ephelileyo ye-CW's I-100 , uyazi ukuba njengoko ixesha lokugqibela lifikile, ngeli xesha lonyaka kuya kuba njalo ngakumbi . Ukugqibela kwethu ukumbona, uClarke wohlukane nabanye abasindileyo beTyeya, engakwazi ukujongana netyala lakhe malunga nento ekufuneka eyenzile ukuphelisa isoyikiso seMount Weather. Kodwa uqhuba njani ngokuqala ubomi obutsha yedwa? UMvelisi oLawulayo uJason Rothenberg usinika ukukhanya kwinto eza kuza ngoClarke kunye nabo bonke abantu baseSky People. ** Abaphangi xa ungabanjiswanga kwixesha lokuqala leSizini 3 **
Ekupheleni kweXesha lesi-2, uClarke uthathe isigqibo sokutshabalalisa yonke impucuko ehlala kwiNtaba yeMozulu ukukhusela i-Sky People kunye ne-Grounders. Xa abantu base Sky bebuyela kwiTyeya, uClarke uxelela uBellamy ukuba uyahamba, uthatha iintlungu kunye netyala lokubulala abantu basezintabeni kunye naye. Uthi, ndiyayithwala ngoko ke akufuneki.
Kudliwanondlebe noNerdist , URothenberg uthetha ngendawo yentloko kaClarke emva kweziganeko zesizini ephelileyo, esithi usenokungaze azixolele, kodwa ela xesha lonyaka le-3 liyinxalenye enkulu ngokusondela kwakhe. Oko kuyakubanzima, kuthathelwa ingqalelo loo ntsomi yento ayenzileyo isasazekile phakathi kwabaGrounders, kwaye ngoku ubizwa ngokuba yiWanheda okanye i-Commander of Death. Ngoku, uzimele ngokuzifihla ezama ukubaleka abo bantu bangaphantsi abaza kumbulala ukuze babambe amandla akhe.
URothenberg ucacisa uWanheda:
Ngokucacileyo akazibizi kanjalo. Uyaziwa ngokuba nguWanheda ngamaGrounders ngenxa yokuba ilivo lisasazeka kwaye linikwa igama. Bayamazi njengoMlawuli woKufa. Le ntombazana isemajukujukwini yatshisa amajoni angama-300 e-badass aphantsi komhlaba kwisangqa somlilo kwi-dropship emva koko yodwa. Nangona wayenoncedo oluvela eBellamy, Monty, kunye nabanye, ngokuqinisekileyo wayitshayela yedwa iNtaba yezulu, eyayisesoyikiso esikhulu emhlabeni. Wayikhupha yedwa ngosuku, emva kokushiywa nguMlawuli ngokwakhe, ekufanele ukuba yeyona nja inkulu, inja embi kwibhlokhi.
Yiyo le nto yentsomi, kwaye uba nguWanheda. Kodwa yinto ayithiyileyo. Yinto abaleke kuyo, azame ukuzifihla kuyo, atshintshe isazisi ngenxa, kwaye ekugqibeleni uya kufumanisa ukuba awunakufihla ukuba ungubani. Awunakho ukuzimela esipilini. Ekugqibeleni, siza kubona ukuba angayifumana na indlela yokufumana kwakhona ubuntu bakhe. Uyaziphika iimvakalelo zakhe, uyazikhanyela naluphi na uhlobo lokuqonda okwenyani kwento ekufuneka eyenzile. Uhambo lweli xesha lonyaka lumalunga nokuzuza kwakhona ubuntu bakhe. Umxholo weli xesha uthi, ‘Kuthetha ntoni ukuba ngumntu?’ UClarke kufuneka ayikhumbule loo nto.
Ukuba ububukele inkulumbuso yeXesha le-3, uyazi ukuba iphelile ngo-Clarke ekugqibeleni wabanjwa, ngumzingeli oyintabalala ogama linguRoan. URothenberg uthi ngokuqinisekileyo ubonakala engumntu ombi xa siqala ukudibana naye. Ngokucothayo kwaye hayi kancinci, siyaqonda ukuba kukho okungakumbi kwelo bali. Unzima.
Ewe kunjalo. Yi le I-100 , emveni kwakho konke.
Kwaye xa sithetha ngobunzima, inkulumbuso yeXesha le-3 ikwasivumele ukuba sazi ubukrelekrele bokuzenzela u-A.L.IE, athe uJaha waqala ukuzibona ngoku afumene isiXeko sokuKhanya njenge-cultist elungileyo. Okwangoku, uMurphy uyiNOPE yonke xa esiva ukuba i-ALIYE inokuba inoxanduva lwayo yonke impucuko yenyukliya ephela kwasekuqaleni.
Elinye ibali elikhulu esilibalisayo yi-A.I. ibali, elithatha ubunzima obuncinci ekuqaleni kwexesha, njengoko lijikeleza njengebali elingaphantsi, ibali lika-B. Kwaye-njengoko ubukele, ukuya phambili emva kwesiqendu sesine-kuya kuqala ukubonakala ngakumbi nangakumbi de kube kuqhume kwinto yonke kwaye kuphambene nje kwaye kupholile.
I-100 Usoloko ethengisa kakhulu ngokungabinangqondo kwaye epholile. Umtya phakathi, bantu! Oku kuya kulunga!
Ngaba ubukele I-100 ?
I-xbox 360 imidlalo kunye nabasetyhini abaphambili
(umfanekiso ngeCate Cameron / I-CW )
Uya Kuba Gembula
Iilebhu Ezimnyama Ze-Phoenix Alchemy
Udavid Gordon Oluhlaza
Umfazi wepaki yomthetho uzuza njengelifa umhlaba
Wayengu-richie gay kule ncwadi
indlala imidlalo castor kunye nepollux
Amantombazana adibeneyo kwamehlo akho kuphela
I-futurama fry kunye neleela kids